स्त्रीले गर्नै हुँदैन यी कार्य : अनिष्ट हुन्छ ,अशुभः हुन्छ ! - Sakaratmak Soch
स्त्रीले गर्नै हुँदैन यी कार्य : अनिष्ट हुन्छ ,अशुभः हुन्छ !
एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन् । महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् । हरेक धर्ममा महिलाहरुको स्थान माथि राखिएको हुन्छ ।साथै महिलाको लागि कति काम यस्तो बताइएको छ कि जुन उनीहरुलाई गर्न इन्कार गरिएको छ ।घर छोडेर हिँड्नुहुँदैन:शास्त्रको अनुसार स्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा आफ्नो घर छोडेर हिड्नुहँदैन । अर्थात अर्काको घरमा बस्नुहुँदैन । यो कुरालाई नमान्दा धेरै नोक्सान हुन सक्ने बताइन्छ ।
नेपाली संस्कृतीमा जनई लगाउने परम्परा बैदिक कालदेखिनै चलिआएको छ । पुरुषको लागि जनई लगाउनु अनिवार्य मानिएको छ तर महिलाले जनई लगाएमा नराम्रो हुने मान्यता रहँदै आएको छ ।जप गर्नुहुँदैन:ओम मन्त्रको अभ्यास गर्दा कतिपय शारिरिक र मानसिक फाइदा हुने बताइन्छ तर यस्तो मानिदैँ आएको छ कि महिलाले कुनै पनि जप गर्नु नराम्रो मानिन्छ ।
फर्सी काट्नुहुँदैन:फर्र्सीलाई सीताको फल अर्थात सीताफल मानिन्छ । यसलाई महिलाले काट्न नहुने मात्यता रहँदै आएको छ । पहिले पुरुषले थोरै काटिदिएपछि महिलाले काट्न सकिने बताइन्छ ।बलि दिन हुँदैन:फरक–फरक धर्ममा उल्लेख भएअनुसार नियम पनि फरक नै हुने गर्दछ ।तर देवतालाई बलि चढाउन महिलाले नहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नरिवल फुटाउन हुँदैन:तपाई हामीले देखेको कुरा हो कि प्राय कुनै पनि शुभ कार्यमा पुरुषहरुले नै नरिवल फुटाएको देखेका छौ । शास्त्रका अनुसार महिलाले यो काम गर्नु हुँदैन ।पतिसँग टाढा बस्नु हुँदैन:शास्त्रको अनुसार कुनै पनि स्त्री आफ्नो पतिसँग धेरै समयसम्म टाढा बस्नुहुँदैन । जीवनसाथीसँग टाढा हुनु स्त्री र पुरुष दुवैको जीवनमा समस्या पैदा गर्न सक्छ ।
हनुमानको पूजा:यो कामको बारेमा तपाईलाई पनि जानकारी भएकै कुरा हो कि हनुमानलाई ब्रमचारी मानिन्छ । महिलाले हनुमानको पूजा गर्न त सक्छन् तर उनीहरुको हनुमानको स्पर्श गर्न मनाही गरिएको छ ।गायत्री मन्त्रको जप गर्नुहुँदैन:शास्त्रको अनुसार महिलाले गायत्रीमन्त्र जप गर्नुहुँदैन । गायत्री परिवारका प्रमुख आचार्य श्री राम शर्माको अनुसार यो जप गर्नु महिलाको लागि श्राप मुक्त गरिदिएको हो ।
यसैगरी हामीलाई अक्सर हामी कस्तो मानिससँग जोडिएका छौँ भन्ने कुराले सताउने गर्छ । किनकी कुनैपनि सम्बन्ध राम्रो हुन दुवैको समान भूमिका र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । उही पुरानै उखानको याद आउँछ कि ‘एक हातले ताली बज्दैन’ । र मानिस कस्तो मान्छेको साथमा बाँकी जीवनको सुनौलो कल्पना गर्दैछ भन्ने कुराले उसलाई बेलाबेलै गम्भीर बनाउने गर्छ । प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक जीवन कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारे पनि खोज अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ मानिसले ।
एक अर्कालाई पूर्णरुपले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार्नु, साझा लक्ष्य वा स्वार्थ पहिचान गर्नु, थोरै म बद्लिन्छु, थोरै तिमी बद्ल र थोरै सम्झौता गरौँला भन्ने भावनाहरुले सम्बन्धलाई नाटकीय रुपले मजबुत बनाउँछ । यद्यपि आजको विषय भनेको अहिले सम्म अक्सर यस्ता युवासँग सम्बन्ध जोड्नुस्, उस्तासँग सम्बन्ध तोड्नुस् जस्ता सुझावका आलेखहरु पढ्ने गरिएको छ ।
यहाँ केही यस्ता व्यवहारिक विषयहरु छन् जसले तपाइले कस्ता युवती छान्ने भन्ने केही टिप्सहरु दिन्छ । गुडम्यान प्रोजेक्टमा प्रकाशित केही यस्ता गुणको वर्णन गरिएको छ यदि यी गुणहरु तपाइको हुनेवाला जीवनसाथीसँग छैन भने विकल्प रोज्ने कि ? वा यो लेख पढ्न दिने पो हो कि ?
प्रशंसा नगर्ने स्वभाव :यदि तपाइ एक वफादार प्रेमी हुनुहुन्छ भने तपाइ सधैँ केही न केही आफ्नो मान्छेको लागि गरिरहनुभएको हुन्छ । त्यस्तै तपाइको आफ्नै उन्नति प्रगति, शिक्षामा सफलता आदि कुराले आउँदो सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यी केही पनि कुराहरुमा यदि उनले तपाइको प्रशंसा गर्दिनन् भने तपाइले अरु कोही भेट्नुहुनेछ जो तपाइको मेहनत प्रति कृतज्ञ होस् ।
अरुसँगको उनको व्यवहार :यदि तपाइको कोही आफन्त साथी वा क्याफेमा काम गर्ने मान्छे आदिसँग उनको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुराले पनि सम्बन्धमा ठूलो माने राख्दछ । यो दुवैको कुरामा लागू हुन्छ । मतलब मानवीय स्वभाव आवश्यक छ कुनै सम्बन्ध अघि बढाउन ।
सबैमा अधिकार जमाउनु :विशेष अवसर बाहेक अन्य बेलामा पनि केही वस्तु वा घुम्न जाने कुराको निम्ति कुनै पनि हालतमा उनलाई पहिलो प्राथामिकता दिनै पर्छ भने यो पनि सुखदायक लक्षण होइन । किनकी सम्बन्ध भनेको दुईवटा चालकले चलाएको एउटै गाडी हो । कहाँ सम्म लाने भन्ने निर्धारण नितान्त दुवैको आनीबानी र भावनाले गर्छ ।नकारात्मक तार्किकता :तपाइ जति धेरै माया गर्नुस् । वा ख्याल गर्नुस् तर त्यो व्यक्तिले तपाइका हरेक प्रयासहरुलाई नकारात्मक ढंगले व्याख्या अपव्याख्या गर्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई तपाइको जीवनबाट सँधैका लागि टाढै राख्नुस् ।
भविष्यको साझा लक्ष्य धेरै फरक भए :दीर्घकालीन सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहँदा यदि दुवै जनामा कम्तिमा न्युनतम साझा लक्ष्य हुन आवश्यक छ । यदि तपाइ मेडिटेसन सेन्टर चलाउने योजनामा हुनुहुन्छ तर आफ्नो पार्टनरले चाँहि वियरको डिलर खोल्ने सोच बनाउँछ भने यसले सम्बन्धमा तित्तता जरुर पैदा गर्दछ । गम्भीर बन्नुस् किनकी जीवनका केही साधारण कुराहरु पनि मिल्न सकेन भने अलमल र दुःखदायी बन्नेछ ।
यदि यस्तो स्थिति छ भने यो जालोमा नफस्नुस् ।जीवनको अन्त्य त्यतिखेर हुन्छ जब हामी रुपान्तरण वा परिवर्तन स्वीकार्दैनौँ । तर आफूले आफ्नो कमी कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई सुधार्ने तर्फ ध्यान लगाएर जीवनको सुनौलो क्षितिज निर्माण गर्ने हामीसँग सँधै यो विकल्प बाँकि रहेको हुन्छ गैरजिम्मेवार वा दोष थाेपर्ने :मानिसले गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो । गल्तीलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु जीवनको हरेक पाटोमा बुद्धिमानी हुन जान्छ । तर यदि तपाइकी प्रेमिकाले आफ्नो गल्ती कैलै देख्दिनन् र अक्सर तपाइमाथि घटना परिघटनाको दोष देखाउन खोज्छिन् भने यसले ज्यादातर सम्बन्धमा खुशीयाली ल्याउने छैन, जानी राख्नुस् ।
अनावश्यक हक जमाउने :हरेक मानिसको व्यक्तिगत जीवन फरक फरक हुन सक्छ । त्यसैले तपाइको जीवनसाथीले यदि तपाइका अन्य साथीभाइसँग घुम्ने, रमाउने समयसँग रिसराग गर्ने, वा अनावश्यक हक जमाउने गर्छिन् भने यसले पनि द्धन्द्ध सृजना गर्छ ।अनियमितता :यदि तपाइसँग उनी अनियमित छिन् भने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, यदि तपाइको फोन कल्स वा मेसेजहरुकाे ठीक ढंगले प्रतिउत्तर आउँदैन भने सम्झनुस् सायद उनीमा तपाइप्रतिको लगाव कम भएको छ । यदि यसो हो त कृपया खुशी खुशी आँफै टाढा रहनुस् । कहिल्यै पश्चाताप हुने छैन ।